प्रकृतिमा भिज्न चाहनुहुन्छ ? यसरी घुम्नुहोस् पोखरा – Nepal Views
प्रकृतिमा भिज्न चाहनुहुन्छ ? यसरी घुम्नुहोस् पोखरा
प्याराग्लाइडिङमा इन्जिन नै हुँदैन भनेर डरले नचढ्ने पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। इन्जिनसहित उडान गर्ने सुविधा पनि छ पोखरामा, अल्ट्रालाइट फ्लाइटमा। टाढाबाट ठ्याक्कै गाइनेकिराजस्तो लाग्ने यो जहाजलाई पाइलटले हिमालको धेरै नजिक लान्छन्। बादललाई पन्छाउँदै सेता टाकुरा नजिक पुग्दा आफैंले छोएको भान हुन्छ।
फेवा तालको आँगनमा लै लै माछापुच्छ्रे छायाँँ
जीवन मेरो सेती बगर बिना तिम्रो मायाँ
कुनै बेला रेडियो र टिभीमा निकै बज्ने यो गीत सुनेर हुर्केका धेरैको मानसपटलमा अहिले पनि पोखरा भन्नासाथ बन्ने तस्वीर हो, फेवातालमा प्रतिबिम्बित माछापुच्छ्रे।
यहि माछापुच्छ्रेको छायाँ चिर्दै फेवातालमा डुंगा सयर गर्नु, लेकसाइडको बजारमा घुम्दै (विशेष गरि साँझमा) ‘विन्डो सपिङ’ गर्नु, डेभिस फल्स, गुप्तेश्वर माहादेव गुफा तथा तालबाराही र बिन्दबासिनी मन्दिर भ्रमण गर्नु, पोखरा घुम्न जाने अधिकांश नेपालीको योजना यस्तै यस्तैमा सीमित हुन्छ।
तर बिस्तारै आधुनिकतातर्फ ढल्कँदै गरेको लेकसाइड, फेवाको बोटिङ र केही मन्दिरमा मात्र घुमेर पोखराको सौन्दर्यपान सकिँदैन। हिमाल र पहाडले घेरिएको सुन्दर उपत्यका पोखरामा यीबाहेक पनि प्राकृतिक सुन्दरतासँगै ‘एडभेन्चर स्पोर्टस्’ र नयाँ ज्ञान पाउन घुम्ने थुप्रै ठाँउ छन्।
धेरैलाई लाग्छ पोखराको पर्याय नै फेवा ताल हो। पोखरा घुमघामको क्रम यसकै वरपर रहेर सकिन्छ। त्यसैले पोखरामा सबैभन्दा भीड लाग्ने भनेको फेवाको डुंगा चढ्नु नै हो।
यता प्राकृतिक क्षमताले धान्ने भन्दा धेरै मानिसको चहलपहलका कारण यहाँको वातावरण कोलाहलपूर्ण रहन्छ। आवश्यकभन्दा बढी भोगचलनका कारण फेवाको किनार र तालको पानी पनि दूषित बनिरहेको छ।
तर उता पोखरा बजारको नजिकै रहेको बेगनास र रूपा ताल भने पाहुना कुरेर बसिरहेका हुन्छन्। बेगनास र रूपा ताल पनि कास्कीमै पर्छन् भन्ने पनि सबैलाई थाहा नहुन सक्छ।
पोखराबाट करीब १५ किलोमिटरको दूरीमा बेगनास ताल र २० किलोमिटरको दूरीमा रूपा ताल पर्छ। बेगनास र रूपा ताललाई मात्र एउटा डाँडाले छुट्याएको छ।
धेरै मान्छे नजाने हुनाले यी ताल र वरपरका ठाउँ फेवाभन्दा शान्त छन्। न यहाँ फेवाका जस्तो भीडभाड हुन्छ, न हल्लाखल्ला नै। डुंगा पनि कम छन्, अनि वरिपरि हरियाली प्रशस्त।
मुख्य कुरा यी दुई तालको वरिपरिको वातावरणलाई, फेवाको लेकसाइडलाई जस्तो आधुनिकताले पनि छोएको छैन। जो एकान्त मन पराएर वास्तवमै प्रकृतिमा भिज्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई यी दुई ताल र तालको वरपरिको डाँडापाखा स्वर्ग हुन्।
नियमित हाइकिङ र ट्रेकिङ गर्नेहरू चलिरहेका रुटभन्दा पनि ‘भर्जिन रुट’ चाहन्छन्, जहाँ पहिला कोही नगएको होस् वा कमै मात्र पुगेका हुन्। र प्रकृतिमाथि धेरै हस्तक्षेप नभएको होस्। तिनीहरूका लागि यी दुई तालसँगै रहेका हरिया डाँडाकाडा नौला हाइकिङ र ट्रेकिङ ट्रेल हुन सक्छन्, जहाँ पहिले प्रायः कमै मात्र पुगेका छन्।
पोखराका लागि भन्ने गरिएको विषेशण, प्राकृतिक सुन्दरताको खानी, वास्तवमा यो ठाउँका लागि उपयुक्त हुन्छ। यदि तपाईं माछाको पारखी हुनुहुन्छ भने त झन् यी तालको ‘अर्गानिक’ माछा खान पाउनु यहाँको अर्को विशेषता हो।
नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकका लागि बनाइएको ‘आइटिनरी’ मा पोखरामा एउटा क्रियाकलाप अनिवार्यजस्तै हुन्छ, सूर्योदयको आनन्द लिने।
तर पोखरा पुग्दा हामीमध्ये कमै मात्र सूर्योदय वा सूर्यास्त हेर्न वरपरका डाँडातिर उक्लन्छौं। हुन त सधैंजसो यत्तिकै देखिने सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्न हामी नेपाली किन धाइ-नधाइ उकालो चढ्थ्यौ र?
तर यदि सही ठाउँ र सही समय पहिल्याउन सकियो भने सूर्योदय र सूर्यास्तमा प्रकृतिले पोखेको कलाको तुलना गर्न सक्ने अर्को चिज हुन्न।
त्यही उपयुक्त स्थानमध्ये एक हो सारङकोट।
पोखरा बजारको उत्तर पश्चिममा रहेको डाँडो, सारङकोट, पोखरा वरपर भएकामध्ये सबैभन्दा मनमोहक दृश्य देखिने ‘भ्यू-प्वाइन्ट’ हो।
विश्वभर ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ ओटा हिमाल छन्। जसमध्ये आठ ओटा त नेपालमा पर्छन्। पोखराबाट यीमध्ये तीन हिमाल देख्न सकिन्छ, अन्नपूर्ण प्रथम, धौलागिरि र मनास्लु।
बिहान सूर्योदयको समयमा अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमश्रृखंलासँगै माछापुच्छ्रे, हिउँचुली, मार्दी, लमजुङ, निलगिरिलगायत हिमालमा सूर्यको पहिलो किरण पर्दाको वास्तविक रंग हालसम्म कुनै पनि चित्रकारले क्यानभ्यासमा सायदै उतार्न सकेका होलान्।
यता भर्खर पहाडको छेकोबाट निस्किएको रातो रंगको डल्लो विस्तारै तर एकैछिनमा सुन्तला, पहेंलो हुँदै सेतो रंगको सूर्य बन्दाको क्षणले जोकोहीलाई पनि साँच्चिकै प्रकृतिमा भुलाउँछ।
मौसमअनुसार सूर्योदयको समयमा फरक पर्छ। त्यसैले आफू जाने सिजनको सूर्योदयको समय हेरेर त्यसको करीब आधा घण्टा जतिअघि नै सारङकोटको ‘भ्यू–प्वाइन्ट’ मा पुगेर उसको उदयलाई कुर्दा राम्रो।
सारङकोट ‘भ्यू-प्वाइन्ट’बाट सूर्योदय र हिमाल मात्र होइन, पोखरा बजार र फेवा तालको ‘हाई एंगल भ्यू’ पनि कम मनमोहक हुँदैन।
सारङकोटमा प्रायः सूर्योदयका लागि मात्र मान्छे जाने गर्छन् तर साँझपख सूर्यास्तको बेलामा त्यही हिमाल र पहाडमा फेरि अर्कौखाले चित्र कोरिन्छ।
बिहानजस्तै बेलुका पनि त्यही सूर्य, तिनै हिमाल र बादलमा विस्तारै रंग भर्दै अनन्तमा रहेका पश्चिमका डाँडामा बिलाउँछ, किनकि भोलिपल्ट उसलाई फेरि पूर्वबाट झुल्किनुछ। यो अनुपम प्रक्रियाको साक्षी बन्नु आफैंमा चानचुने कुरा होइन।
अझ तपाईं हाइकिङको सौखिन हुनुहुन्छ भने त हिँड्दै सारङकोटको डाँडो चढेर ‘भ्यू–प्वाइन्ट’ पुग्नुको आनन्द कम छैन। करीब तीन घण्टा हाइकिङ गरेर डाँडामाथिको गाउँ पुगेपछि, परिश्रमपछिको सूर्यास्तको फल अझ मिठो हुन्छ।
तर बिहानचाहिँ हाइकिङ गरेर सूर्योदय हेर्न जाने चेष्टा नगरेकै राम्रो, सूर्योदय भ्याउन मुस्किल पर्छ। सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्न अहिले पोखरा नजिकको अर्को ठाउँ काउडाँडा पनि प्रख्यात बन्दैछ।
विश्व शान्ति स्तुपासम्मको हाइकिङ
पोखराको पश्चिमपट्टि रहेको डाँडामा हिमालजस्तै सेतो टल्किरहने विश्व शान्ति स्तुपाले धेरैको ध्यान तान्ने गर्छ। विश्वमा रहेका ८० ओटा ‘पिस प्यागोडा’ स्तुपामध्ये यो एक हो। प्रायः पोखरा घुमघामका क्रममा यो पनि छुटाउनै नहुने ठाउँमा पर्छ।
लेकसाइडबाट गाडीमा करीब आधा घण्टाको दूरीमा नै यहाँ पुग्न सकिन्छ। धेरैजसो यसैगरी नै शान्ति स्तुपा पुग्छन्। तर स्तुपा जाने एउटा वैकल्पिक र रोमाञ्चक तरिका छ।
सबैभन्दा पहिला बोटिङ गरेर फेवा ताल पारि जाने। ताल पारिपट्टि रहेको रानीवनमा हाइकिङ गर्ने बाटो छ। यसपछि बिस्तारै जंगलभित्रको शितलतामा यही रुटबाट उकालो लागेर करीब एक घण्टामा नै स्तुपा पुग्न सकिन्छ।
पोखरामा छोटो हाइकिङ गर्नेहरूका लागि यो राम्रो छनोट हो। प्रायः विदेशी प्रर्यटकहरू स्तुपा जान यो बाटो नै प्रयोग गर्छन्। एकै पटकमा घुमघाम र हाइकिङको मजा।
माथिबाट फर्कँदा पनि सोही बाटो आउन सकिन्छ तर वनबाट झरिसकेपछि फेरि तालवारि आउन भने खाली डुंगा पाउने सम्भावना कम रहन्छ। त्यसैले यसको व्यवस्था पहिले नै गरेर गएको राम्रो।
हाइकिङमार्फत फेवा तालमाथिको डाँडामा रहेको स्तुपामा पुगेर पोखरा उपत्यका, विभिन्न हिमश्रृखंला, फेवा तालको विशाल रूप र वरपरका हरिया डाँडा र पहाड हेरेपछि फेरि हाइकिङको अर्कै रुटबाट फर्कन पनि सकिन्छ। फर्किँदा स्तुपातलको स्थानीय गाउँ हुँदै सीधै डेभिड फल्स नजिकैको बजारमा ओर्लिने विकल्प छ।
हाइकिङ र ट्रेकिङको बेस क्याम्प
पोखरालाई नेपालको ‘ब्याक प्याकरर्स प्याराडाइज’ मानिन्छ, जसको अर्थ हो ट्रेकिङ जानेका लागि स्वर्ग। हामी पोखरालाई घुम्ने ठाउँका रूपमा मात्र हेर्छौ तर पोखरा त हाइकिङ र ट्रेकिङको ‘बेसक्याम्प’ अर्थात आधारशिविर जस्तै हो।
यहीँबाट एक दिने हाइकिङदेखि हप्तौं चल्ने विश्व प्रसिद्ध ट्रेकिङको तयारी र शुरुआत हुन्छ। ट्रेकिङका लागि चाहिने सबै सामान यहीँ पाइन्छ। आवश्यक पर्मिट पनि यहीँ बनाउन सकिन्छ र ट्रेकिङ शुरु गर्ने स्थानसम्म यातायात सेवाको व्यवस्था पनि पोखराबाटै हुन्छ।
त्यसैगरी ट्रेकिङबाट फर्केर आएपछि आराम गर्ने र लामो हिँडाइपछिको थकाइ मार्दै रमाइलो गर्ने ठाउँ पनि यही हो। यदि कुनै ट्राभल एजेन्सीमार्फत जान चाहनुहुन्छ भने पनि लेकसाइडका गल्ली-गल्लीमा एजेन्सीहरू पाहुना कुरेर बसिरहेका हुन्छन्। तर नेपाली भएर आफ्नै देशका ठाउँहरू घुम्न सकेसम्म आफ्नै प्रबन्धमा गएको राम्रो।
एकदिने हाइकिङका लागि उक्लन त पोखरा वरपरका डाँडाकाडा धेरै छन्। त्यसैगरी दुई दिनको ट्रेकिङका लागि धम्पुस जान सकिन्छ, तीन दिनका लागि पञ्चासे। यी तुलनात्मक रुपमा सजिला रुटमा पर्छन्।
त्यसैगरी चारदेखि पाँच दिनको मध्यम तहको ट्रेकिङ गर्नेका लागि घोरेपानी-पुनहिल उपयुक्त रहन्छ। यसपछिका केही कठिन मानिने र हिमालको फेदीमा नै पुगेर फर्कने यात्रामा भने करीब एक हप्तामा गर्न सकिने अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र मर्दी हिमालको बेस क्याम्पसम्मको ट्रेकिङ पर्छन्।
अझ गाह्रो र रोमाञ्चक अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेक गर्ने हो भने त पूरै दुई हप्ताभन्दा बढीको समय खर्चनुपर्छ। तर पूरै अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलालाई फन्को मार्दा र पाँच हजार सात सय मिटरको थोराङ्ला पास हिँडेर नै पार गर्दाको मज्जा अन्यमा कहाँ?
मोटरसाइकल र साइकल टुर
पोखरा बजार वरिपरि घुम्ने धेरै ठाउँ छन्। तर घुम्न जाने सबैसँग आफ्नो सवारीसाधन हुँदैन। होटेल वा एजेन्सीका गाडी महँगा लाग्यो र सार्वजनिक गाडीमा पनि घुम्न मन लागेन भने गर्ने के त?
पोखरामा यसको पनि विकल्प छ। लेकसाइडमा भाडामा मोटरसाइकल र साइकल पाइन्छन्। एक दिनका लागि मोटरसाइकल भाडामा लिने हो भने पोखरा नजिकका प्रायः सबै पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न भ्याइन्छ। एकातिर मोटरसाइकल टुर पनि हुने अर्कातिर सबै स्थल घुमिने पनि।
अझ लामै टुर गर्ने हो भने मोटरसाइकल भाडामा लिएर पोखराबाट धम्पुस, घान्द्रुकजस्ता चर्चित पर्यटकीय स्थानदेखि मुक्तिनाथसम्म साहसिक यात्रा गर्न पनि सकिन्छ। जुन प्रायः विदेशीले गर्छन।
त्यस्तै साइकल भाडामा लिएर लेकसाइडमा घुम्नेदेखि वरपरका डाँडा र गाउँमा माउन्टेन बाइकिङ पनि गर्न सकिन्छ। लेकसाइडबाट बेगनास र रूपा तालसम्म जान पनि साइकलिङ नै गर्न सकिन्छ।
पोखरा घुम्दा आकाशमा उडेका चराजस्ता प्याराग्लाइडिङ गरिरहेका धेरैलाई हामीले देखेकै हुन्छौं। धेरै नेपालीलाई यसरी प्याराग्लाइडिङ गर्ने भन्ने चिज विदेशीले मात्र गर्ने होजस्तो लाग्छ। तर त्यसो होइन, नेपाली पर्यटकले पनि सजिलै यसको मजा लिन सक्छन्। विदेशीलाई भन्दा पैसा पनि कम छ र आजकाल नेपालीले पनि प्याराग्लाइडिङलगायत ‘एडभेन्चर स्पोर्टस्’ को मज्जा लिने ट्रेण्ड निकै चलेको छ।
फेरि धेरैलाई यो पनि लाग्दोरहेछ कि प्याराग्लाइडिङ त आफै एक्लैले उडाउने जिनिस हो। त्यसैले आफैले यसलाई सम्हाल्न नसक्ने डरका कारण पनि धेरैले यसमा चढेर उड्ने आँट गर्दैनन्।
तर त्यसो पनि होइन। यसलाई एक व्यवसायिक लाइसन्स पाएको पाइलटले नै उडाउँछन्। आफू त उनीसँगै बसेर मजा लिने मात्र हो। बिनाइन्जिनको यसलाई हावा र डोरीको सहायताले सन्तुलनमा राख्दै उडाइन्छ।
सारङकोट डाँडाको भ्यू प्वाइन्ट नजिकैबाट उडेको प्याराग्लाइडिङ हावामा गोता खाँदै तलमाथि गर्दै, घुम्दै, कहिले पल्टँदै अन्त्यमा फेवा तालको किनारमा ओर्लिन्छ।
प्रायः आधा वा एक घण्टाको यसको उडानमा बिनापंख चराजस्तै उड्दै ‘बर्ड आई भ्यू’ बाट वरपरका गाँउ, पहाड, हिमाल, फेवा ताल, वन-जंगल र पोखरा शहरको दृश्य हेर्न पाइन्छ।
प्याराग्लाइडिङमा इन्जिन नै हुँदैन भनेर डरले नचढ्ने पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। इन्जिनसहित उडान गर्ने सुविधा पनि छ पोखरामा, अल्ट्रालाइट फ्लाइटमा। यो सानो जहाज हो जसलाई उडाउने पाइलटसँगै बसेर उड्न पाइन्छ। पाँच हजार फिटसम्मको उचाइमा उड्न सक्ने यो चिज ५० देखि ९० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा उड्न सक्छ।
टाढाबाट ठ्याक्कै गाइनेकिराजस्तो लाग्ने यो जहाजलाई पाइलटले हिमालको धेरै नजिक लान्छन्। बादललाई पन्छाउँदै सेता टाकुरा नजिक पुग्दा आफैंले छोएको भान हुन्छ।
लेकसाइडबाट करीब गाडीमा २० मिनेटको दूरीमा नै रहेको हेम्जामा बन्जीजम्प गर्ने व्यवस्था छ। करीब ८० मिटर अग्लो डाँडामा बनाइएको टावरबाट तल खोला किनारमा बन्जी हान्न सकिन्छ। यो बन्जी तुलनात्मक रूपमा भोटेकोशीजति अग्लो त छैन तर रोमाञ्चक भने पक्कै छ।
यही बन्जी सञ्चालन गर्ने कम्पनीले नै पोखरामा जिपलाइनिङ पनि चलाएको। यो जिपलाइनिङ गर्दा सारङकोट डाँडाको उत्तरपट्टिको भागबाट फलामे डोरिमा बाँधिएको अर्को विशेष प्रकारको डोरीमा बसेर एकै पटक तल, हेम्जामा बन्जी गर्ने ठाँउसम्म आइपुगिन्छ।
यसलाई सञ्चालकले संसारकै लामो र भिरालो जिपलाइनिङ बताउँछन्। करीब ५६ डिग्री झुकाव रहेको यो जिपलाइन १.८ किलोमिटर लामो छ, जसमा माथिबाट तल आउँदा ६ सय मिटरको उचाइ घट्छ। अधिकतम करीब एक सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा तल आउने यो जिपलाइनलाई निकै तीव्र गतिको मानिन्छ।
पोखरामा हामीलाई फेवा तालको बोटिङ मात्र थाहा होला। तर पोखरा नजिकै माथिल्लो सेती नदीमा र्‍याफ्टिङ पनि गर्न सकिन्छ। लेकसाइडमै रहेका विभिन्न निजी कम्पनीहरूले विभिन्न प्याकेजमा यसको सञ्चालन गर्छन्।
माथिल्लो सेतीमा त्रिशूली र भोटेकोशीको जस्तो खतरा ‘र्‍यापिड’ पनि छैन। तेस्रो र चौथो लेभलको सामान्य र्‍यापिड रहने हुनाले यसलाई बच्चा र पूरै परिवारका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ। सेतीको सेतो पानिमा ‘ह्वाइट वाटर र्‍याफ्टिङ’ सँगै क्याम्पिङको सुविधा पनि कम्पनीले दिन्छन्।
सायद तपाईंलाई थाहा नहोला पोखरामा पाँच ओटा संग्रहालयहरू छन्। जसमध्ये सबैभन्दा प्रख्यात हो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय।विशेषगरी यो संग्रहालय नेपालमा रहेका हिमाल, ती हिमाल चढ्ने मानिसका विभिन्न कुरा र त्यही हिमाल वरिपरि बसोबास गर्नेको कला, संस्कृति, भेषभूषासँग सम्बन्धित छ।
यो ठाउँमा हिमालसँग निहित रहेका इतिहास, भूगोल, संस्कृति तथा वनस्पति र जीवबारे श्रव्य-दृश्यसहित सम्पूर्ण ज्ञान पाइन्छ। हिमालमा भएका प्रख्यात पर्वातारोहणबारे पनि जानकारी पाइन्छ यहाँ। यदि तपाईंलाई ट्रेकिङ र हाइकिङमा रुचि छ भने यो म्युजियम त झनै मनपर्छ।
पोखरामा रहेको अर्को गोर्खा मेमोरियल म्युजियममा संसारमा भएका साना-ठूला युद्धमा नेपाली बहादुर सिपाहीहरूले देखाएको वीरताको झझल्को हेर्न पाइन्छ। यहाँ विश्वयुद्ध लगायतमा गोर्खाली सैनिकले देखाएको बहादुरीको इतिहासलाई बुझ्न पाइन्छ।
त्यसैगरी पोखरामा रहेको क्षेत्रीय संग्रहालयले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको जनजीवनको ज्ञान दिन्छ भने अन्नपूर्ण संग्रहालय विशेषगरी विभिन्न प्रजातिका पुतलीमा केन्द्रित छ।
पामेतिर लाग्ने कि ?
पोखराको पर्यटन विस्तारै पामेतिर सर्दैछ। फेवाको किनारै-किनार उत्तर-पश्चिमतिर लागेपछि पुगिने क्षेत्र हो पामे। पोखराको बजार र मुख्य लेकसाइडको भीडभाड र होहल्ला मन नपराउने तर लेकसाइडकै आनन्द लिन चाहनेका लागि पामे सही रोजाइ हो।
हाल पामे क्षेत्रमा राम्रा रेष्टुरेन्ट र होटेल खुलिसकेका छन्। यो क्षेत्रको लेकसाइड शान्त रहन्छ र तालमा धेरै हस्तक्षेप पनि हुँदैन। तालनजिकै केही उचाइमा रहेकाले यहाँबाट तालको आकार पनि फराकिलो र आकर्षक देखिन्छ। साँझपख मुख्य लेकसाइडको झिलिमिलीको प्रतिबिम्ब तालमा पर्दाको दृश्य यहाँबाट हेर्न निकै मनमोहक हुन्छ।
पामे क्षेत्रमा अझ केही माथि गाउँतिर उक्लन सक्ने हो भने त हाल धेरै अर्गानिक खानेकुरा पाइने रिसोर्ट र पाहुना घर खुलेका छन्। जसले आफ्नै वरिपरि फलेका तरकारी र स्थानीयस्तरमै पालिएका पशुपंक्षीजन्य खानेकुराको प्रोत्साहन गर्छन्।
पोखरामा गएर पोखराको कोलाहललाई ‘स्किप’ गर्न चाहनेका लागि पामे उत्कृष्ट रोजाइ हो।
२०७८ मंसिर २५ गते ७:१३